ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ လူနာတွေ့ရှိရပြီးနောက် မြောက်ဦးမြို့အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲ – Nyang Media
MUYA /ပိုးတွေ့လူနာ နေထိုင်ခဲ့သော ရပ်ကွက်
ကုန်ဈေးနှုန်းကတော့ နည်းနည်းတက်လာတဲ့အခြေအနေလို့ ယူဆလို့ရတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကလည်းပိတ်သလိုဖြစ်နေ၊ ပိုးတွေ့ လူနာ …
ကိုဗစ်လူနာတစ်ဦးစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့အခြေအနေကို သြဂုတ်လ(၂၂) ရက်နေ့က မြောက်ဦးလူငယ်များအစည်းအရုံး (MUYA) ဥက္ကဌ ကိုခိုင်မင်းသျှင်အား ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိမြောက်ဦးမြို့ရဲ့အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
KMC – အခုလက်ရှိမှာ မြောက်ဦးမြို့က COVID – 19 ပိုးတွေ့လူနာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရပ်ကွက်ကို Lock Down ချထားတယ်။ တခြားနေရာတွေကိုတော့ Lock Down ချထားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ မရှိသေးဘူးဗျ။ ဈေးကတော့ အခုလက်ရှိမှာ မနက် (၆) နာရီမှာဖွင့်ပြီး မွန်းလွဲ (၁) နာရီလောက်မှာပိတ်တယ်။ နယ်တွေကနေ မြို့ပေါ်ကိုဈေးလာဝယ်တဲ့လူတွေကျတော့ အကန့်အသတ်တွေရှိတာပေါ့။ ရွာတွေမှာက သွားလာရေးကိုကန့်သတ်ထားတာတွေရှိတယ်လေ။
မြောက်ဦးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို အင်တာနက်ရတဲ့ တခြားမြို့ကလူတွေပြောမှသိရတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်း တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ အရေးပေါ် အချိန်နဲ့တပြေးဘီ ပြည်သူလူထုပါပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင် အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ …
ငြမ်းဒီယာ – မြောက်ဦးမြို့မှာ ပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိရတယ်ဆို တော့ လက်ရှိမှာ မြောက်ဦးမြို့ခံလူထုရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
KMC – စိုးရိမ်ပူပန်မှုကတော့ အများကြီးရှိတာပေါ့။ မြောက်ဦးက ပိုးတွေ့လူနာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတောင် မြောက်ဦးမြို့ခံတွေက သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်တာကိုတွေ့ပြီး သိရတာမဟုတ်သလို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်က သိရတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အင်တာနက်က ပေးတယ်ဆိုပေမယ့် အဆင်ပြေပြေ သုံးလို့ရအောင်ပေးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ 2G ပဲပေးထားတာဆိုတော့ ဒီသတင်းကို တခြားမြို့တွေက အသိမိတ်ဆွေတွေ ဖုန်းဆက်လှမ်းပြောမှသိရတာပါ။ ဆိုတော့ ကိုယ့်မြို့မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို တခြားမြို့ကလူတွေပြောမှသိရတဲ့အနေအထားက မြို့ခံလူထုရဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုရေချိန်ကို အမြင့်ဆုံးရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်သလို ဖြစ်သွားစေတာပေါ့။
ပိုဆိုးတာက သိရတဲ့သတင်းက စိုးရိမ်စရာသတင်းဖြစ်နေတယ်လေ။ နောက်တစ်ချက်က အင်တာနက်လိုင်းတွေ အဆင်ပြေပြေသုံးလို့မရတော့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားတဲ့ ရောဂါကာကွယ်ဖို့ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်အချက်တွေကိုလည်းမသိကြဘူး။
ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးမှုတွေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုလည်း ဒေသခံအများစုက ဘာမှမသိကြဘူး။ မြေပြင်မှာ ကွင်းဆင်းပြီး ပညာပေးတာတွေ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပေးတာလည်းမရှိတော့ အခုလိုသတင်းကိုရုတ်တရက်ကြားသိရချိန်မှာ မြို့ခံလူထုရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုက အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်သွားတာပေါ့။
တကယ်လို့သာ ပညာပေးဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်တွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုသာ အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် လူတိုင်းအလွယ်တကူသိခွင့် ကြည့်ခွင်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျော့ချနိုင်မှာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလို ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တချို့မှာ 4G အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်မရဘဲ ဖြတ်တောက်ထားမှုကြောင့် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကိုပြောပြပေးပါဦး။
KMC – ကျနော်တို့ရခိုင်ပြည်ပြောက်ပိုင်းကမြို့တွေနဲ့ ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝမြို့တွေမှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာကို ပြန်ဖွင့်ပေးပြီဆိုပြီး ပြောတော့ပြောကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်က 2G ပဲရတယ်။ 2G ဆိုပေမယ့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလို့ရတဲ့ 2G မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။
facebook messenger က စာပို့တာတောင် အချိန်တော်တော်ကြာမှ တွေ့ရတာမျိုးဆိုတော့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖတ် ရှု မျှဝေဖို့အတွက်က လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဆိုတော့ အခုလို COVID – 19 ကိစ္စအတွက် Online ကနေ သတင်းအချက်အလက်ရဖို့အတွက်ကတော့ တော်တော်လေးခက်ခဲ ဆိုးရွားနေပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က မြောက်ဦးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို အင်တာနက်ရတဲ့ တခြားမြို့ကလူတွေပြောမှသိရတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်း တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ အရေးပေါ် အချိန်နဲ့တပြေးဘီ ပြည်သူလူထုပါပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင် အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ နောက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးလိုမြို့တွေမှာ COVID – 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးမှုတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှုတွေ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေကို Online ကနေ ထိထိရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပေမယ့် ကျနော်တို့မြောက်ဦးမှာကတော့ အင်တာနက်မရလို့ အဲဒီလိုတွေလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေကလည်း တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိမြောက်ဦးမြို့မှာ မြို့နေလူထုအတွက် သက်ဆိုင်ရာကနေ ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်နေတာတွေ့ရပါသလဲ။
KMC – သက်ဆိုင်ရာကဆောင်ရွက်တာကတော့ ပိုးတွေ့လူနာနေထိုင်တဲ့နေရာအနီးတဝိုက်ကို Lock Down ချထားပါတယ်။ ပြီးတော့ လူနာနဲ့ထိတွေ့ဆက်စပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကို မနေ့က (၂၁ . ၈ . ၂၀၂၀) စပြီး Quarantine ဝင်ခိုင်းပြီးစောင့်ကြည့်နေတာတော့ရှိပါတယ်။
ပိုးတွေ့ လူနာတစ်ယောက်ကလည်းရှိလာတော့ အများစုက စားသောက်ကုန်တွေကို တစ်ပတ်စာ ဆယ်ရက်စာ စသဖြင့်အလုအယက်ဝယ်ကြတော့ ဝယ်လိုအားမြင့်လာလို့ ကုန်သည်ဘက်က ဈေးတင်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ …
ငြမ်းမီဒီယာ – ရောဂါကာကွယ်ဖို့အသုံးပြုရတဲ့ Maskတို့၊ လက်အိတ်တို့လို အထောက်အကူပစ္စည်းတွေ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
KMC – ပိုးတွေ့လူနာတစ်ယောက်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားကတည်းက Mask တို့၊ လက်အိတ်တို့လို ရောဂါကာကွယ်ဖို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေ အဝယ်များပြီး အခုဆိုပစ္စည်းဝယ်လို့ မရတော့အထိကို ပြတ်သွားပါတယ်။ ဈေးနှုန်တွေကလည်း ပုံမှန်ထက် နှစ်ဆလောက်တက်သွားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်တို့၊ မန္တလေးတို့က ပစ္စည်းမှာမယ်ဆိုရင်လည်း လမ်း ကြောင်းတွေပိတ်ထားတော့ ပစ္စည်းရောက်ဖို့က အချိန်တစ်ခုယူရမယ့် အခြေအနေဆိုတော့ ဒီကာလအတွင်းမှာ အဲဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲက အများကြီးရှိနိုင်တာပေါ့။ တချို့ NGO တွေက စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့နေတာတွေလည်းရှိတော့ အခုလိုအခြေအနေမှာ …
ငြမ်းမီဒီယာ – ပိုးတွေ့လူနာရှိလာတဲ့အခြေအနေကြောင့် မြောက်ဦးမြို့မှာ ခရီးသွားလာမှု၊ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာက ကန့် သတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိနေတာလား။
KMC – ဌာနဆိုင်ရာကနေ တရားဝင်ပိတ်လိုက်တာမျိုးကိုတော့ ကျတော်တို့မကြားမိသေးပါဘူး။ သူတို့ဘက်ကလုပ် ထားပြီး ကျနော်တို့သတင်းမသိရသေးတာမျိုး ဖြစ်နေသလား တော့မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုး တချို့ပြောနေကြတာတွေလည်း ကြားနေရတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲရှိသွားတဲ့အနေအထားအရ အခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့ လူသုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
KMC -ကုန်ဈေးနှုန်းကတော့ နည်းနည်းတက်လာတဲ့အခြေအနေလို့ ယူဆလို့ရတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကလည်းပိတ်သလိုဖြစ်နေ၊ ပိုးတွေ့ လူနာတစ်ယောက်ကလည်းရှိလာတော့ အများစုက စားသောက်ကုန်တွေကို တစ်ပတ်စာ ဆယ်ရက်စာ စသဖြင့်အလုအယက်ဝယ်ကြတော့ ဝယ်လိုအားမြင့်လာလို့ ကုန်သည်ဘက်က ဈေးတင်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာ။
NGO တွေမှမဟုတ်ပါဘူး တခြားကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရွာတွေကိုသွားလို့မရလို့ ရပ်ထားရတော့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲက အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ …
ငြမ်းမီဒီယာ – မြောက်ဦးမြို့က စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာရော အခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
KMC – မြို့ပေါ်က စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့ ဘယ်မသွားရဘူး၊ ဘယ်ကိုမလာရဘူး စသဖြင့်ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်တာတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့ ကျေးရွာကနေ စည်းကမ်းချက်ထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်။
အခုဆို တချို့ကျေးရွာတွေက စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကို မြို့ပေါ်ကလူတွေ မလာရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။ အခုကျနော်တို့မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ကလူတွေကို ရွာတွေကအဝင်မခံတော့ဘူး။ ရွာတွေကိုသွားလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ မြို့ပေါ်က စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့ အဲဒီလိုကန့်သတ်ချက်မျိုး မရှိသေးပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာအခြေအနေကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
KMC – အခုလက်ရှိမှာ NGO တို့ INGO တို့ကလည်း လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပြီ။ တရားဝင်လည်း စာထွက်ပြီးပြီထင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲက အများကြီးရှိနိုင်တာပေါ့။ တချို့ NGO တွေက စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့နေတာတွေလည်းရှိတော့ အခုလိုအခြေအနေမှာ သူတိုလည်း ကျေးရွာတွေကိုသွားလို့မရဘဲ ရပ်ဆိုင်းနေရတယ်။ NGO တွေမှမဟုတ်ပါဘူး တခြားကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရွာတွေကိုသွားလို့မရလို့ ရပ်ထားရတော့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲက အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
KMC – အခုလက်ရှိမှာ COVID – 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပါ။ COVID – 19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဒေသခံတွေအားလုံး အချိန်နဲ့တပြေးညီ တိတိကျကျသိရဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ပညာပေးမှုတွေ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်လည်းလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက COVID – 19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ သိရှိရဖို့၊ ပညာပေးမှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ 4G အင်တာနက်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က လုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
Tags: covid19, မြောက်ဦး, ရခိုင်ပြည်နယ်, အင်တာနက်
NLD ပါတီ ထောက်ခံသူကို ပုံဖျက်ထားတဲ့ သတင်းအမှား နဲ့ဘယ်လို တိုက်ခိုက်လဲ